Ozi niile sitere na Ahụmịhe PlayStation | Akụkọ akụrụngwa
La PlayStation Ahụmahụ afọ a mere site na December 5 ruo 6 na San Francisco, na ogbako nke Sony nke were awa abụọ juputara na ọkwa, gụnyere ihe ịtụnanya dị ụtọ dịka Ni No Kuni II: Alaeze Revidence, Ace Combat 7 ma ọ bụ vidiyo ebe anyị hụrụ maka oge mbụ ezigbo egwuregwu nke ndị a na-atụ anya nke ọma Final Fantasy VII remake.
N'ezie, enweela ohere maka egwuregwu ndị ọzọ ndị Fans na-achọsi ike PlayStation 4dị ka Onweghi 4: Otu Onye Ohi, nke egosiri vidio nwere ihe nkiri nke anyi nwere ike ileba anya na ntinye aka nke ịhọrọ ahịrị mkparita uka, ihe a na-enwetụbeghị ụdị ya na saga. Dịka onyinye dị oke egwu, rịba ama na Shawn dina, president nke sony america, O yi uwe elu T-shirt n’elu ebe nkiri okuku Bandicoot, na nwata nwoke, isi ike na igwu egwuregwu a na agwa a nwere ike iwetara anyi ezigbo obi uto na uzo.
Egwuregwu nke Final Fantasy VII remake Ọ dịla ezigbo mma ma na-enye nghọta na etu ọgụ a ga-esi rụọ ọrụ n'egwuregwu ahụ, ebe ọ dị ka ndị ọzọ agbanweela ihe a ga-eme, mkpebi nke ga - eme ka ndị egwuregwu anaghị anwụ anwụ, mana nke ahụ na - eme egwuregwu ahụ. enwere ike inweta ndi mmadu. square Enix O jikwa ohere ahụ kwuputa na ụdị nke 1997 a mara gboo ereworị maka PlayStation 4, ịbụ otu egwuregwu ahụ hụrụ ìhè na PC afọ ole na ole gara aga, mana yana mgbakwunye nke ya maka njikwa Sony, dị ka trophies.
N'otu ụzọ ahụ anyị nwere dị ugbu a Abụba adaeze ahụmahụ ya na PS4, egwuregwu nkwekọrịta maka ndị egwuregwu anọ, Ocheeze Nuclear (PS4, PS Vita na PC), Bastion (PS4, PS Vita), usoro Bit.Trip nwekwara ike ibudata maka otu consoles, mgbe Naa egbe!, a free iji rụọ ọrụ na atụmatụ egwuregwu nke ga-adị na mkpịsị aka gị na-amalite na-esote Wednesday, December 9 maka PlayStation 4.
Site na ndị okike nke a maara nke ọma IP nke Borderlands anyị nwere ike ichere Battleborn, nke pụtakwara na nke a PlayStation Ahụmahụ na a mara ọkwa ọhụrụ agwa, Toby, nke ga-abụ naanị PlayStation 4 n'oge emeghe beta phase, na kwa, ndi n’eme beta na igwe beta Sony, mgbe ahụ ha ga-enwe agwa a n'efu na nsụgharị ikpeazụ nke egwuregwu ahụ.
Capcom na-etinye anụ niile na igbuasu na nke gị Fighter V, nke ga-abata 16 maka February n'afọ ọzọ ka PlayStation 4 y PC. Ejila oge ahụ webata onye agha ọhụrụ, AK, si otú a mechie ndepụta nke ndị agha 16 mbụ nke egwuregwu ahụ ga-ebu, mana a ga-agbasawanye akwụkwọ a n'oge 2016 na mbata n'efu nke Alex, Guile, Balrog, Ibuki, Juri y Urien.
Ihe okike Tim schafer hụrụ PlayStation Ahụmahụ ma were usoro iji kwado nke ahụ Daybọchị nke ụlọikwuu ahụ A ga-ere ya na Machị nke afọ na-abịa. O kwupụtakwara na ọ na-agbanwegharị usoro ọhụụ ọzọ lucasarts, Ntụgharị zuru ezu, nke ga-erute ha abụọ PlayStation 4 dị ka PS Vita. Ma ọ bụrụ na ọ dị obere nye anyị inwe ọdịnihu n'ọdịnihu Psychonauts 2, a na-ekwu okwu banyere ọhụụ ọhụụ sitere na mbara igwe a n'okpuru isiokwu Psychonauts na Rhombus nke Ruin na ezubere maka PlayStation VR.
Fans nke saga Yakuza, adịworị kpochapụwo nke SegaHa achọtawo ozi ọma na nke ọjọọ, ma ọ dịkarịa ala maka ndị Europe. Ọ bụrụ na anyị ebido na nke dị mma, anyị ga-agwa gị nke ahụ Yakuza 5 ga-emesị gaa na-ere na December 8 maka Playstation 3. Banyere ihe ọjọọ, ọ na-emetụ ozugbo na igba egbe nke eighties na nwunye nke Yakuza 0, nke ga-erute ha abụọ PlayStation 4 dị ka PlayStation 3, ma ọ dịghị nkwenye maka ókèala Europe, dị ka anyị hụworo na Twitter nke Sega: «Anyị maara na saga Yakuza bụ ndị niile Fans hụrụ n'anya na Europe, mana ọ dị nwute n'oge a, anyị enweghị ike ikwenye nke mbụ nke Europe Yakuza 0".
Ajụjụ Eze ndị na-alụ ọgụ XIV gosipụtara ihe ọhụụ ọdịyo ọhụụ, na-egosi ihe odide dị ka Angel, Ralf, Billy Kane, Kula o EzeỌ bụ ezie na n'ọkwa a na-ahụ anya, ọ dị ka ọ bụ ihe mgbe ochie ma ọ naghị atọ ọtụtụ ndị na-eso ụzọ nke kpochapụwo egwuregwu. Nke na-esote Ratchet & Clank ga-adị na Eprel 12 na egwuregwu ọhụrụ nke Team Ninja a hụkwara ya ma dị egwu: anyị enweghị ọtụtụ nkọwa nke Na-Oh, ma n'ezie na ngwakọta nke Onimusha, Mkpụrụ Obi Ọchịchịrị na ìhè aka musu anyị na-amasị.
Ọ bụ oge nke iko eziokwu eziokwu si Sony, PlayStation VR, nke ụlọ ọrụ ahụ yiri ka ọ na-etinye mgbalị dị ukwuu iji nye aha aha naanị, yana ndakọrịta na ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịtụgharị uche Ugo elu de Ubisoft, nke anyị nwere ike iji nyochaa ugo nke Paris na anya ugo, nke pụtara ìhè Zombie taxi nke oge a de sony Santa monica, nke anyị ga-eme dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala na nzuzu zombie apocalypse, na golem, ihe njem nke anyị ga-abanye na akpụkpọ nke nnukwu okwute. Anyị ga-egosiputa mgbasa ozi ga-atọ ndị biri afọ ike Nrọ na ha nwere Ala dị ka otu n'ime aha kachasị mma na usoro ahụ: na nke a PlayStation Ahụmahụ a kwadoro ya Rez enweghị njedebe na PlayStation VR, a remake nke kpochapụwo si ọhụrụ console Sega -magbanyeghi na anyi huru ya n'ime PS2-, nke ga - egosikwa onye okike nke mbụ, Tetsuya mizuguchi.
E kwupụtakwara ọkwa ọzọ nke aha, dịka ọrụ simulator, nke ga-eme ka anyị mata akpụkpọ ahụ ndị ọkachamara dị iche iche, dịka ndị osi ite ma ọ bụ ndị ọrụ ọfịs, ma ọ bụ 100ft Robot Golf, egwuregwu na-agwakọta nnukwu ígwè ọrụ na golf. Ma ihe na-akpali mmasị bụ nkwenye nke mmepe nke Ace buso 7 agha, a ọhụrụ nkeji nkeji nke ikuku ọgụ saga nke Namco onye buru uzo ya n’agadi PlayStation na nke ahụ ga-ekwekọ na PlayStation VR -a olile anya na usoro ihe omume a ga - eme ka anyi chefuo banyere nke ikpeazu Mwakpo mwakpo-.
Otu n'ime ihe ịtụnanya kachasị PlayStation Ahụmahụ bụ ọkwa nke Ni No Kuni II: Revidence Alaeze, na nsonye na jrpg ahụ a na-apụghị igbochi egbochi nke pụtara na PlayStation 3 na a ga-emepe ọzọ site na Ọkwa-5, na ụfọdụ ndị isi aha si ọrụ mbụ ahụ, dị ka Akihiro hino na ọrụ ya dị ka onye nduzi na Joe hisaishi na-ahụ maka ụda ụda.
Eziokwu bụ na ọ bụrụla mmemme e tinyere na mgbasa ozi, nke dị mma iji melite ọnọdụ nke Sony ya PlayStation 4, ọbụna karịa, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Ikekwe akwụkwọ akụkọ kachasị mmasị na-atọ ụtọ bi na amụma ndị ana-atọ ụtọ nke aha ndị Japan na-anwa ịdọta ọha mmadụ PlayStation VR: Obi dị anyị ụtọ ịmara na a ga-enwe ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-enye nkwado na ndakọrịta maka akụkụ a, mana anyị ka na-atụfu sọftụwia na-adọrọ adọrọ mara mma, nke na-egosi n'ezie isi okwu a ga-eme.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » Akụkọ niile banyere ahụmịhe egwuregwu PlayStation
Ndị a bụ njirimara bụ isi nke igwefoto igwefoto kwesịrị inwe